Fil d'actualités du 26/04/2018
26/04/2018 - 13:50 : RAJAONAH ANDRIANJAKA: Higadona an-tanindrazana ny alahady izao ny nofo mangatsiakany, ary halevina ny 02 mey.
26/04/2018 - 13:35 : SABOTSY NAMEHANA:Natalo androany 26 Aprily 2018 ny fitsarana mitety vohitra; nanatanterahana ny fanaovana ny Kopia Faobe hoan'ireo tanora sy ankizy latsaky ny 18 taona ho an'ny Distrika Antananarivo Avaradrano my tao amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana.
26/04/2018 - 13:15 : ANOSY: Tsara ambin'ny mpitandro filaminana ny tranom-panjakana, toy ny antenimieram-pirenena.
26/04/2018 - 12:50 : ANOSY: Tapaka ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao noho ny fanateran'ny depiote sy ny vahoaka taratasy fotoana ny Filohan'ny.
26/04/2018 - 12:20 : ANALAKELY: Miomana hihazo an'Anosy ny mpanao fihetsiketsehana ny depiote sy ny vahoaka.
26/04/2018 - 12:00 : FANABEAZAN'AIZANA: Manodidina n'y 33% n'y tahan'ny fanovana fanabeazan'aizana eto Madagasikara, ka ho an'ny faritra Androy Dia 5%, araka ny tatitry ny UNFPA.
26/04/2018 - 11:30 : ANALAKELY: Raikitra ny filaharam-be ataon'ny sendika isan-karazany.
26/04/2018 - 11:00 : FMM ( Force Médiane Mixte): Ilaina ny fifandaminana samy Malagasy ary ny Fianakaviambe Iraisa-pirenena no nampanao amboletra teto ny taona 2013, hoy ny FFM.
26/04/2018 - 10:30 : POLITIKA: Manao fanambarana eny amin'ny Hotely Colbert ny FMM ( Force Médiane Mixte) izay milaza fa afaka manantona ny mpitondra sy ny eny amin'ny 13 mey handaminana izao korontana ara-politika izao.
26/04/2018 - 10:00 : BAOLINA KITRA-COSAFA CUP: Ireto avy my anaran'ireo mpilalao ho any Afrika Atsimo ny 27 mey-9 jona: Leda, Ando, Andry, Toby, Mario, Ronald, Théodin, Johnny, Ando, Bapasy, Dax, Baggio, Tsiry, Mika, Lôlôdy, Lalaina, Boura, Marco et Zotsara, Rojo, Lakrisy, Angelo, Carolus, Faneva Ima.
Archive du 20171209
Jeneraly Ralala Roger Hotendrena praiminisitra ?
Manomboka maresaka ny ao ambonimbony ao amin’ny fitantanana ny firenena. Tsy noho ny noely sy ny fetin’ny faran’ny taona ihany fa noho ny sangodim-panina politika.
Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Mila ampidirina ny fokontany, hoy i Olivier Rakotovazaha
Raha ny lalàmpanorenana no resahina, dia ny kaominina, ny faritra ary ny faritany, hoy ny Loholona Olivier Rakotovazaha.
Fiainam-pirenena, fifidianana Nankasitraka ny fiarahamonim-pirenena i Dadavalo
Mankasitraka tanteraka ary misaotra ny fiarahamonim-pirenena tamin’ny hevitr’izy ireo nampihaona ny mpisehatra eo amin’ny politika mba handinika ny momba ny lalàm-pifidianana Atoa Marc Ravalomanana.
Depiote Michel Antsirabe I Tsy ny fisotroan-dronono no maika fa ny fahoriam-bahoaka
Mitsipaka marin-drano ny fangatahan’ny solombavambahoaka fisotroan-dronono ny depioten’Antsirabe voalohany, Atoa Jean François Michel.
Ligy rezionalin’ny Tsipy kanetibe Atsinanana Raikitra indray ny « Tournoi de Litchis »
Taorian’ny « Tournoi Boss sy Elite » notontosain’ny klioba FAM Ambohipo tetsy Mahamasina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo dia hetsika « doublette hommes Elite sy Boss »
Efa zatra fita-bitro izahay e !
Ao ve ry Jean a ! Manao ahoana ihany ny gidragidranareo ao e ? Toa renay mantsy fa dia efa tena mifanjinja sy mifamango mihitsy ry Rabekonetaka sy ry Solobe ao an !
Trafikana boaderozy Ezahana saronana ny “raharaha Singapour”
Niaraha-nandre ny fanapahan-kevitry ny CITES na ny fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena mikasika ny zava-manan’aina sy zava-maniry ahiana ho lany tamingana amin’ny mbola fitohizan’ny sazy ho an’i Madagasikara momba ny tsy fahafahana manondrana sy mivarotra hazo sarobidy.
Claudine Razaimamonjy Nohalavaina 6 volana ny fitazonana am-ponja azy
Ny 3 aprily 2017 no nosamborina teny Mahamasina i Claudine Razaimamonjy rehefa tsy namaly ny antso nataon’ny Bianco ny tenany.
Pakistanais eto Madagasikara Maro ireo mamoa-doza
Tsy natao hankahalana vahiny fa efa tena manafintohina ny ataon’ireo teratany Pakistanais sasany na ireo teratany vahiny avy any Pakistan tonga eto Madagasikara tato ho ato.
Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly Mifantoka amin’ny fanentanana ny tanora
Hankalazaina anio sabotsy 9 desambra ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly.
Ady amin’ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina Vonona amin’ny fotoana rehetra ny OLEP
Toy ny isan-taona dia misy hatrany ny fanazaran-tena ho an’ireo efa notsongaina hatrizay hanatanteraka ny vonjy voina sy fisorahana ny fahalotoan’ny ranomasina vokatry ny fahaverezan-tsolika an-dranomsina na an-tanety.
Fanampiana ara-tsakafo tamin’ny rivodoza Nokianin’i Ny Rado Rafalimanana ny fanjakana
7 volana lasa izay no nandalovan’ny rivodoza Enawo teto amintsika ary anisan’ny faritra voa mafy ny faritra SAVA misy an’i Sambava, Antalaha, Vohemar, Andapa.
Kaominina Andoharanofotsy Hisaotra an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny asa marobe
Fotoan-dehibe ho an’ny kaominina Andoharanofotsy ny datin’ny 22 desambra ho avy izao.
Boxe Française Savate – Ligin’Analamanga Hangotraka ny « Grand Combat 2017 » rahampitso
Hangotraka ny « Grand Combat 2017 » Boxe Française Savate hotontosaina etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina rahampitso alahady 10 desambra tolakandro.
Basikety N1 A lahy sy vavy Fantaro ireo hiatrika ny 1/2-dalana anio
Anio no hanarahana ny lalao manasa-dalana rehetra eo amin’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondaka nasionalin’ny basikety baolina miverina sokajy N1 A lahy sy vavy hotontosaina ety amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina.
Rugby à XV Tompondakan’Analamanga
Samy hahitana fifandonana mahasarika mpitia lavalava avokoa eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga taranja rugby à XV
Vaksiny iadiana amin’ny lefakozatra Mila tohizana hiarovana ny zaza, hoy ny minisitera
Hifarana anio sabotsy 9 desambra manerana ny Nosy rehefa naharitra efatra andro ilay hetsika vaksiny faobe iadiana amin’ny aretina lefakozatra (Polio) andiany faha-11 karakarain’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka ho an’ireo zaza latsaky ny dimy taona.
TSENA B –Village Voara Manasongadina ny vita Malagasy
Nosokafana omaly tamim-pomba ofisialy tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka, ary haharitra telo andro, ilay hetsika tsena B karakarain’ny Infinity Group sy ny First evenementiel.
Tsenan’Anjoma Hanomboka ny 18 desambra
Tetsy Analakely sy Mahamasina ihany no nisy ny tsenaben’ny Noely nokarakarain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra hatramin’izay. Hiavaka tsy toy ny mahazatra izy amin’ity taona 2017 ity.
Fitsirihana ireo tontakely mpanakorontana Hampiasa fitaovana harifomba ny CUA
. Naseho tamin’ny haino aman-jery tetsy amin’ny lapan’ny tanàna ireo fitaovana fitsirihana ireo tontakely, toy ny kamera fanaraha-maso izay mahita hatramin’ny zava-mitranga eny amin’ny 500 metatra sy ny “Talkie walkie”
JOHNNY HALLIDAY Ny Elysée dia nanambara ny Alakamisy 7 desambra, fa ny fanomezam-boninahitra nasionaly an'i Johnny Halliday dia hatao ny Sabotsy izao ao Paris. Alohan’ny handevenana sy hialany ny Arc de Triomphe, dia handalo ny Champs Elysées ary mankany amin'ny Place de la Concorde alohan'ny hitondrana azy ao amin'ny fiangonana any Madeleine, hoy ny mpitondra tenin’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron.